हेमराज शर्मा प्रतिष्ठानद्वारा सम्मान : सामाजिक सेवामा राजनीतिक भागभण्डा नगरौं– नेता पाण्डे – ebaglung.com
२०७६ जेष्ठ ३१, शुक्रबार २०:२५	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७६ जेठ ३१ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सेवामा राजनीती भागभण्डा गर्न नहुने बताएका छन् । बागलुङ पैयुँपाटामा रहेको हेमराज शर्मा प्रतिष्ठानको छात्रबृत्ति वितरण एवं सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेता पाण्डेले समाज र समुदायको विकासका निम्ती सवै एकजुट हुनेपर्ने बताए । धौलागिरी क्षेत्रकै अग्रज समाजसेवी स्वर्गिय शर्माको तेस्रो स्मृति दिवसको अवसरमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
पाण्डेले स्वर्गिय हेमराज पौडेलको योगदान धौलागिरीबासीहरुले कहिलै भुल्न नहुने बताए । राष्ट्रिय सभामा प्रमुख विपक्ष दलका नेता समेत रहेका पाण्डेले केपि वलीको दुई तिहाईको सरकाले दम्भ देखाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले सरकार एक्लै चलाउन खोज्नुभएको छ, नेता पाण्डेले भने, उहाको यो दम्भ अब धेरै बेर टिक्नेवाला छैन । काँग्रेसको सहयोग विना कुनै पनि काम पुरा नहुने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा धौलागिरीका बरिष्ठ समाजसेवी डाक्टर भुपेन्द्र बहादुर खड्का , गण्डकी प्रदेश सांसद ललितकला गुरुङ नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापा, समाजसेवी डिल्ली प्रसाद शर्मा, त्रिभुवन माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनानाथ शर्मा, नेकपाका उमानाथ शर्मा, नेपाली काँग्रेसका सभापति चन्द्र बहादुर खत्री लगायतले स्व. हेमराज शर्मा पौडेलले धौलागिरी क्षेत्रको सामाजिक विकासका निम्ती ठुलो योगदन गर्नुभएको हुँदा उहाँको योगदान अहिलका पुस्ताका लागि प्रेरणाको श्रोत भएको बताएका थिए । स्वर्गिय हेमराज पौडेल धौलागिरी क्षेत्रकै शिक्षाप्रेमी एवं समाजसेवीको रुपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रममा समाजसेवी सम्मानमा म्याग्दीका बरिष्ठ अधिवक्ता एवं काँग्रेसका पुर्व सभापति भुपेन्द्र बहादुर खड्कालाई सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी स्व. हेमराज शर्मा पौडेलका समकालीन सहयात्रीको रुपमा रहेर सहयोग गर्ने १६ जना समाजसेवीलाई सम्मान गरिएको छ ।
जसमा बा.न.पा. १३, पैयुँपाटा, सातविसेका पण्डित भवदत्त उपाध्याय, डण्डपानी उपाध्याय, बडहरेका नारायण प्रसाद ढकाल, सिम्लेका भवनी प्रसाद शर्मा, सल्यानका आईते सार्की, लहरेबरका शशिधर जैसी, महेश्वर आचार्य, डाँडाखेतका दुर्गादत्त रखाल, काभ्राबोटका भुमिश्वर पौडेल, घडेरीका महेश्वर रिजाल र बास्कोटका लक्ष्मीकान्त रिजाल रहेका छन । त्यसैगरी मुसुराबारीका खडकसिंह परियार, बा.न.पा.१४ नारायणस्थानका हरिकुकार श्रेष्ठ, देवकान्त पौडेल, बा.न.पा. १२ अमलाचौरका टुकनाथ शर्मा र खगेन्द्र पौडेललाई सम्मान गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष किरणराज पौडेलले बताए ।
त्यस्ते प्रतिष्ठानले विभिन्न विद्यालय र क्याम्पसमा गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रबृति वितरण गरेको छ । जसमा जनमत माविका किशोर लामिछाने र प्रतिक्षा रिजाल, त्रिभुवन माविका पवित्रा नेपाली, रोशन परियार रहेका छन । त्यस्तै धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा सर्वोकृष्ट अंक ल्याउने प्रेम रिजाल, वलेवा पैयँपाटा बहुमुखी क्याम्पसबाट सर्वोकृष्ट अंक ल्याउने सावित्रा शर्मालाई छात्रबृति तथा सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै गरी वलेवा नारायणस्थानमा रहेको गणेश माविमा अध्ययनरत तीन जना विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानले पढाउने जिम्मा लिएको छ ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन माविमा अध्ययनरत अन्य १० जना विद्यार्थीलाई पोशाक समेत वितरण गरिएको छ ।
कार्यक्रम हेमराज प्रतिष्ठानका अध्यक्ष किरणराज पौडेलको अध्यक्षता, पुर्व महासचिव चुडामणि शर्मा पौडेलको स्वागत र सचिव कृष्ण पौडेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।